Amber Rose na-ekpughe otu ọnwụ Kobe Bryant si gbaa ume n'egedege ihu - ndị mmadụ - teles relay
Amber Rose gosipụtara otú ọnwụ Kobe Bryant si mee ka egbugbu egbugbu ya - ndị mmadụ
By Toyin Owoseje | Okwu
Amber Rose kwuru na mkpebi ya ime ka aha ụmụ ya yie n'egedege ihu ya sitere na NBA akụkọ Kobe Bryant.
Modeldị na onye mmume mere akụkọ n'isi ọnwa a mgbe ọ pụtara n'okwu a "Bash Slash" - raara onwe ya nye ụmụ ya nwoke "Bash" (maka Sebastian Taylor) na "Slash" (maka Electric) Alexander Edwards) - na akwụkwọ ozi curses dị n'okpuru ntutu isi ya.
O gosipụtara na Wednesday na usoro Fox Soul "Otu na Otu na Keyshia Cole," ọ na-enwu banyere ụzọ esemokwu ọ na-asọpụrụ ụmụ ya.
Bryant nwụrụ, ya na nwa ya nwanyị dị afọ 13, Gianna Bryant na mmadụ asaa ndị ọzọ, na helikopta dara na Calabasas, Calif., N’ọnwa gara aga.
"Achọghị m ka ọ daa ụda cheesy ma ọ bụ ihe ọ bụla, mana obere oge mgbe Kobe (Bryant) nwụrụ ọ mere ka m chee echiche banyere ndụ m," ọ gwara Cole. "Achọghị m ka ndị mmadụ kwuo 'Oh Kobe anwụọla na ị gara igbu egbugbu', mana ọ bụ ụdị ihe ahụ. "
Rose, dị afọ 36, gara n'ihu kwuo na ọnwụ Bryant abụghị naanị ihe kpatara egbugbu - ọgụ nna ya na ọrịa kansa nwere mgbe ọ dị afọ 40 bụkwa ihe na-akpali akpali .
"Ọ banyere na mgbaghara ma ọ dị mma ugbu a mana ọ fọrọ nke nta ka ọ nwụọ," ka ọ gara n'ihu. "Achọrọ m egbu egbu a ogologo oge ma ọ dị m ka, 'know maara ihe, ndụ dị mkpụmkpụ, mee ya. Naanị ibi ndụ kacha mma. "
O kwukwara na ya anaghị akwa ụta. "Nke a bụ mmetụta m nwere obi ụtọ na m mere ya," ọ siri ọnwụ.
Inye ihe omimi ohuru nke Rose abatala. N’ụbọchị Tusde nke ihe ngosi nkata ya nke US, Wendy Williams jụrụ mkpebi mkpebi Rose ime ka ihu ya gbadaa, na-agwa ndị na-ege ntị, “Amber, ị maara na m hụrụ gị n’anya nwa agbọghọ. , ma gini mere ichoro imebi egedege ihu gi? "
Williams wee kwuo na Rose nwere ike "nweta otu n'ime wigs Anna Wintour ndị a ma kpuchie ya niile ngwa ngwa." "
Rose abụghị onye ọbịa na ngosi ahụ, mana na-aza nzaghachi na post na Instagram, Rose dere, “Maka ndị na-agwa m na m mara mma maka ihu, ndị a bụ otu ndị ga-agwa m na m mara oke mma, ọbụlagodi na ha chere na m jọrọ njọ ma ghaara m ụgha ... ma ọ bụ na ha ga-agwa m na m jọgburu onwe ya. "
O kwukwara, sị, “N’ụzọ ọ bụla, omume nke akụkọ a bụ iji ndụ mee ihe ọ bụla masịrị gị. "
& © 2020 Cable News Network, Inc., ụlọ ọrụ WarnerMedia. Ikike niile echekwabara.
AmberBryantcommentn'ihun'ike mmụọ nsọKobeọnwụndị mmadụ
Georges Elanga Obam gosipụtara ụbọchị ntuli aka nke ndị isi obodo obodo ahụ na ndị nnọchi anya ha